Jiilka Hubka Ku Faana // Shabaab 2.0 | KEYDMEDIA ONLINE
Jiilka Hubka Ku Faana // Shabaab 2.0
Abudlkarim Haji Seeko (Keydmedia) - Dalkeeni waa baaba’ay oo Burburay, ma jirto cid ka fakarta aayo Umadeed iyo waxtarkeeda, ma jirto dan guud, ma jirto Dariiq toosan isku hagaajin, ma jirto tarbiyo Caruur oo toosan, ma jiro ixtiraam waalid oo haboon.
Arimahan oo dhan waxaa laalay Al-shabab oo isku diray Caruurta iyo Waalidkooda isla markaana jideeyay Dhaqano Ummada Soomaaliyeed ay ka xishoon jirtay tan iyo bilowgii Ilbaxnimada Bulshada Soomaaliyeed markii soo bilaabatay.
Waxaan u soo joognay Wanaag lagu badalo Wanaag, waxaan arki jirnay in Caruurta kolka ay imtixaanada iskuulada ama kan dugsi qur’aanka ay ku guuleesto in lagu abaalmariyo Hadiyado Wanaag badan sida in dhar, saacad, kabo iwm. loo iibiyo.
Maanta waxaan u joognaa xili abaalmarintu ay tahay Bam, bistoolad, Ak47 iyo dhamaan hubkii laga ordi jiray.
Diinta islaamka oo ah mid nabadeed waxa ay Umadaha islaamka ku boorineysaa in mar walba laga feejignaado wax walba oo dhibaata horseedi kara isla markaana la muujiyo Dadaal, Wanaag, howl qabad iyo isku gacan qabashada horumarka.
Shabaab waxa ay Ummada u jeexeen Dariiq cusub oo aad uga fog midkii haboonaa ee Ummada loogu tala galay iyagoona wax walba oo laga xishoon jiray ka caadayeeshay.
Seddexdii Sano ee la soo dhaafay Kooxda waxa ay dhalan rog ku sameysay nidaamka dhiira galinta Caruurta Soomaaliyeed.
Halkii Caruurta laga siin laha Nacnac waxa ay siiyaan Bam, halkii jalaata laga siin lahaana waxa ay u dhiibaan Bistoolad waxaana taasi ay daboolka ka qaadeysaa in Kooxda Shabaab ay tahay mid dooneysa in ay sameyso Bulsho dhamaanteed hubka ku Faanta.
“Waligey ma arkin Dugsiiley Qori abaal marin loo siinayo, ma waxaa loogu gol leeyahay ha dilo Macalinkiisa” Sidaa waxaa yiri Asli Cismaaneey oo dagan xamarweyne isla markaana idaacadaha ka Maqashay in Al-shabaab Dhalinyaro ku abaalmariyeen hub kadib tartan Qur’aan aqris ah.
Caqliga fiyow ee Aadanaha iyo Diinta Islaamka labaduba waxa ay na barayaan in ay tahay mid haboon barbaarinta ubadka in la hagaajiyo isla markaana laga dhigo Caruurta kuwa Bulshada horumarkeeda ka shaqeysa laakiin ficilda Shabaab marka la fasiro waa kuwa u muuqda in la doonayo Caruur la marin habaabiyay isla markaana dhaqankoodii la badalay.
60 Sana jirka ku dhashay Magaalada isla markaana ka badbaaday Dhaqan Colaadeedka Soomaalida ay ku caan baxday waxaa laga yaabaa inuu ka dhaaran karo isticmaalka hub, laakiin hada waxaa muuqaneysa in Al-Shabaab ay doonayaan in 6 Sana jirka jooga Dalka inuu noqdo mid hubeysan oo laga dhaadhiciyay inuu jiro Cadaw ay Qasab tahay inuu la dagaalamo.
Kama xishoodaan Horjoogayaasha Shabaab oo iski sheega Culumaa'u-Diin in ay fagaarayaasha la yimaadaan dhawaqyo ay ku sheegayaan in ay Caruur Soomaaliyeed oo Tartan ka qeyb gashay ay ku abaal marinayaan Hub nuucyo kala duwan leh si ay u noqdaan kuwa Dagaalka ay wadaan Shabaab daacad u ah.
Dadka Soomaalida inta badan waxey aaminsanyihiin Shabaaku in ey yihiin Bilcagsiga Islaamka. In ey Yihiin Kuwo waali Isir naceyb ey maskaxada ka fadhido. In ey yihiin kuwo Dhaqaalo iyo Darajo doon ah. In ey yihiin kuwa Dhiiga Dadka Islaamka ku naaxay.
Mukhtaar Raabow ayaa isagu ah Shaqsiga ugu horeeya ee Sanad walba Gacantiisa ku Siiya Hubkan abaal marinta loogu talagay siiya Caruurta Soomaaliyeed, laakiin ilaa iyo hada lama soo marin in Caruurta Roobow ama Godane ay qeyb ka yihiin dadka lagu abaalmariyay Hubka.
Falsafada ugu weyn ee arintaan ayaa ah iyada oo ay Shabaabka doonaya in dhamaan jiilka Cusub ee Mustaqbalka soo kacaya ay noqdaan kuwa la jidbeysan Dhaqanka Ummada leynta ku saleysan ee Kooxda Shabaab. Shabaab 2.0.
Xalku wuxuu ku jiraa in Waalidiinta Soomaaliyeed ay ku dadaalaan sidii ay Caruurtood uga joojin lahaayeen Dhaqamada xun xun ee ay Shabaab faafinayaan, hadii aanay taas dhicin guri walba oo Soomaaliyeed waxaa laga filan karaa inuu noqdo mid marti galaya Caruur Hubeysan.
Hadii ay tani dhacdo waxaa suurta gal noqoneysa in Caruurta Maanta oo ah ubxii Mustaqbalka ay isku badalaan qab qablayaal Dagaal oo qori caaradii ku faana kuwaasoo danta Shacabka iyo tan Dalka toona aan ka naxeyn.
Abudlkarim Haji Seeko – Keydmedia Correspondent - Abudlkarim.haji.seeko@keydmedia.net